यसकारण रेणुको जीतमा ओलीको सबैभन्दा ठूलो योगदान - nepal day
प्रकासन मिति : ९ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०३:२२
शुभशंकर कँडेल : देशभर नै सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महनरपालिकाको गणनाको रोचकता कम भएर आश्चार्य बढिरेहेको देखिएको छ । कसरी यति धेरै फरक प¥यो ? कसरी रेणुलाई यति धेरै मत आयो ? कसरी एमालेले पनि रेणुलाई मत दिए जस्ता प्रश्नहरु चितवनका चोक, गल्ली र चिया पसलमा सुन्न पाइन्छ । यस्ता प्रश्न अझै केही समय चलिनै रहनेछन् ।
यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक भने होइन् । चितवन महानगरपालिकाभित्र माओवादी केन्द्रको पार्टी हैसियत र जनमत तेस्रो नै हो । त्यो पनि निकै ठूलो जनमतको अन्तरमा । तर अघिल्लो पटक अलिक बढी बद्नामकीका साथ मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि भतरपुरको राजनीतिक र जमिनी दृश्य बदलिएको तर्फ धेरैको ध्यान नगएको पाइन्छ ।
नेकपा विघटन भएपछि एमालेलाई लाग्यो– रेणुलाई प्रचण्डकी छोरी भनेर हेपिरहेमा आफ्नो पक्षमा माहोल बन्नेछ । त्यसैका लागि ओली समेत भरतपुर उत्रेर चितवनका कांग्रेसले जहिलसुकै प्रचण्डका बाउ–छोरी बोक्न पर्ने भयो । विचराहरुले रुखमा कहिले भोट हाल्ने होलान् भन्दै दया देखाएको स्वाङ गरेर कांग्रेसीहरुलाई उत्तेजित पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यो तरिका परम्परागत आलोचनको सा¥है निम्छरो विरोधको शैलीभन्दा बढी केही थिएन । र भएन पनि ।
अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा रेणु चितवन जाँदा उनी प्रचण्डको छोरीकै रुपमा गएकी थिइन् । आम मतदाताले त्यसरी नै बुझेका थिए । यद्यपि उनी त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेकी थिइन् । प्रत्यक्ष चुनाव पनि लडेकी थिइन् । प्रचण्डको परिवारभित्रबाट निसन्देह एकजनामात्र राजनीतिक चरित्र बोकेकी सन्तान उनीमात्रै थिइन् । यस्ता कुरातर्फ भरतपुरवासीलाई त्यति धेरै मतलव नभएको बुझिन्थ्यो उतिबेला ।
अब उनले चुनवा जित्दै गरेको सन्दर्भ भन्नु पहिले जित्ने निश्चित देखिएको जमिनका बारेमा चर्चा गरौं । चैत महिनाका तीन हप्ता यो पङिक्तकार भरतपुर बस्नु परेको थियो आफ्नै पारिवारिक कारणले । चैत ६ गते मेरो आमको दुखद निधन भएपछि हामी सबै परिवारका सदस्य त्यहीं थियौं । हाम्रो परम्परा र चलन अनुसार हामीलाई भेट्न दाजुभाई, छरछिमेकी र साथीभाई आउने नै भए । हामीलाई भेट्न सवैभन्दा बढी त कांग्रेस समर्थक र एमालेका साथीहरु आएका थिए । माओवादीहरुलाई यस्ता कुरामा मतलव हुँदैन । केवल आफनो सो¥याक परे हुन्छ । १३ दिनसम्मको कर्मकाण्डका बेला धेरै जसो सचेत मतदाताहरुसँग भेट भएको थियो । त्यतिबेलै भरतपुरमा एमालेको घरदैलो अभियान चलेको थियो । मित्र कृष्णभक्त पोखरेलले भरतपुरको अवस्थाबारे विस्तारमा मलाई बताउनुभएको थियो । ‘सैपनि एमाले, मैपनि एमाले‘ भन्ने गीतमा युवायुवतीको आकर्षणबाट माननीय पोखरेल पनि चकित परेको उहाँले बताउँदै वास्तविक स्थितिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
राजनीतिक कार्यकर्ताहरु सत्ता र शक्तिका पदमा पुगेपछि ती पदले उत्पन्न गर्ने विकारपूर्ण तापबाट नउम्लने कोही पनि हुँदैन । त्यसमाथि झन देश नै हाम्रो आदेशमा चल्नु पर्छ भन्ने कथित आग्रहको दास बनेका माओवादी नेता कार्यकर्तालाई